.ဆေးဖကျဝငျပုံ တမူထူးတဲ့ လောကျသပေငျ. – Askstyle
.ဆေးဖကျဝငျပုံ တမူထူးတဲ့ လောကျသပေငျ.
Item Name —— Desmodium triquetrum DC(လောက်သေပင်)
Category ——— Raw Material
Botany Term —– Desmodium triquetrum DC
Species Family — Papilionaceae.
ပင်ပျော့ ပင်ငယ် သက်ပြင်း မျိုး ဖြစ်သည်။ မှီတွယ် ရာမရှိ သော နေရာများ ၌ မြေပေါ်တွင် ဖြန့်တွား ပေါက်၏ ။ အမြင့် ၅-၆ ပေခန့် မြင့်၏။ ပင်စည် သေးသွယ် ပြီး မွဲခြောက်ခြောက် ရောင်ရှိသည်။ အကိုင်း အခက် များ အညိုရောင် ရှိသည်။
ရွက် လွဲ ထွက်၏။ အလျား ၆ လက်မ ၊ အနံ ၂ လက်မ ခန့် ရှိ၏။ ရွက်ထိပ် ချွန်၏ ။ အပေါ် မျက်နှာ ပြင်တွင် သေးငယ်သော ဆူးကလေးများ ရှိသည်။ ရွက်ညှာအတောင် ပါသည်။ ရွက်ညှာရင်းနားတွင် ရွက်စွယ်အဖတ်လေးများ ရှိ၏ ။
သီးတောင့် ဖြစ်သည်။ ၁ လက်မမျှ ရှည်၍ ပြား၏ ။ ၁ လက်မ မျှ ရှည်၍ ပြား၏။အဆစ် ၆-၈ ထိရှိ ပြီး ပြောင်ချော ၏ ။ သို့မဟုတ် အမွေးနု များ ရှိသည်။ တပေါင်း ၊ တန်ခူး လများ တွင် အသီး ရင့် မှည့်သည်။
မြန်မာ ဆေးကျမ်း များ အလိုအရ လောက်သေ ပင် သည် လေ ၊ သလိပ် သည်းခြေကို နိုင်၏ ။ အသက်ကို ရှည်စေ ၏ ။ ကာမကို အားပေး ၏ ။ ရောဂါ ဖြစ်စေသော ပိုး များ ကို ပယ်တတ် ၏ ။ အဆီကို တိုးပွား စေ ၏ ။ အူတို့ ကို တွန့်ရှုံ့ စေတတ် ၏ ။ အဖျား ရောဂါ ၊ အဖျား ရောဂါ ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ်မသက်သာ မှု ၊ လေရောဂါ၊ မြင်းသရိုက် ၊ ဖောရောင်ခြင်း ၊ပန်းနာ ချောင်းဆိုး ၊ ရေငတ်နှင့် အန်ခြင်း တို့ကို ပျောက်စေနိုင် သည်။
၁။ အရွက် မနုမရင့် ကို ပြုတ်၍ သုပ်စား ခြင်း ၊ တို့စား ခြင်း ဖြင့် ဝမ်းကိုက် ရောဂါ ၊ ဝမ်းဖော ဝမ်းရောင် ရောဂါ ၊ ကလေးများ သန်ဝမ်းကိုက် ခြင်း၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ် ခြင်း ပျောက်၏ ။
၄။ လောက်သေရွက် နှင့် ထားဝယ် မှိုင်း ရွက် ကို ရေနွေး ဖြော ၍ သုပ်စား သော် ဆီးပူ ၊ ဆီးအောင့် ၊ ဝမ်းကိုက် ၊ သွေးဝမ်းသွား ၊ သွေးမြင်း သရိုက် ၊ မီးယပ် သွေးလွန် တို့ကို ရပ်တန့် စေသည်။
၅။ လောက်သေ ရွက်ခြောက် ၊ ဖလံ တောင် ဝှေး ရွက်ခြောက် တို့ကို ဆတူ အမှုန့် ပြု ၍ အုန်းဆီ နှင့် ဖျော် စပ်ပြီး နေပူပူ တွင် လှန်း၍ အပေါ် ဆီအကြည်ကို နားတွင်း သို့ အစက်ချ ခြင်း၊ ကြက်တောင်နှင့် ကြပ်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက နားပြည်ယို ၊ နားကိုက် ရောဂါ များ ပျောက်ရန် နားတွင်း ရှိ ပိုးများကို သေစေသည်။ လိမ်းဆေး အဖြစ် သုံးပါက ဝဲနာ၊ အနာစက်နာ ၊ အနာမီးလျှံ ၊ အိုင်းနာ ၊ ဒက်နာများ ပျောက်၏။
၆။ လောက်သေရွက် ၊ စံကားစိမ်း ပွင့်ခြောက် တို့ကို နှမ်းဆီ စစ်စစ်နှင့် စိမ်ပြီး ခေါင်းလိမ်းဆီ အဖြစ် သုံးပါက ခေါင်းကိုက် ၊ ခေါင်းပူ ၊ ဗောက်ထခြင်း ၊ ယားခြင်း ၊ သန်းပေါခြင်း များ ပျောက်၍ ဦးနှောက် ကို ကြည်လင် စေသည်။
၇။ လောက်သေရွက် နှင့် ဆောက်ပြာရွက် ၂ မျိုးကို ပြုတ်၍ ရေနွေးနွေး ဖြင့် မီးဖွား ပြီး နောက် မိခင် ကို လည်းကောင်း၊ ကလေးကို လည်းကောင်း ချိုးပေးပါက ကျဗဟုံး ရောဂါ ၊ မွေးကတည်း က ပါလာတတ်သော သူငယ်နာ မျိုးစုံ ၊ အကြောတက် ၊ အကြောကပ် ရောဂါနှင့် မိဘကိုယ်မှ ကူးစက်တတ် သော ရောဂါ များကို ကာကွယ်နိုင်၏။
၉။ လောက်သေရွက် ၊ ရေခရာ ရွက် ၊ နနွင်း ရိုးရိုး အရွက် ဆတူ အကျွမ်း လှော်၍ နှမ်းဆီတွင် ဖျော် လိမ်းပါက ကလေးများ ချက်ကြိုး ချက်တိုင် ကိုက်ခြင်း ပျောက်၍ ချက်ကြိုး ကြွေလွယ်၏ ။ နို့ချောင်း ပိတ် ၊ နို့နာ ၊ နို့ပျဉ်းထ သော မိခင် များကို လိမ်းပေးက လျင်မြန်စွာ သက်သာ ပျောက်ကင်း စေ၏။
၁၁။ ကျွဲ နွား များ အနာပေါက်၍ လောက်ကောင် များကျခြင်း ၊ ငပိအိုး တွင် လောက်ကောင်များ ကျခြင်း အတွက် ၎င်း လောက်သေရွက် ကို ထောင်း၍ အမှုန့်ဖြူး ပေးသော် လောက်များ သေကြေ ပျက်စီး ပြီး အနာများ ကို လည်း အသားနု တက်၍ ကျက်စေ၏။
၁၂။ စအို မျှော့ ဝင်ကာ ရောဂါ အတွက် လောက်သေရွက် ၊ ကြွက်နား ပေါင်းရွက်၊ ကြက်မွေး(ကြက်တောင် မှ အမွေး) ၎င်း ၃ ပါး ဆတူ စု၍ ပြုတ်ပြီး အငွေ့ကို ချွေးအောင်း သကဲ့သို့ အိုးပေါ်တွင် ထိုင်ပြီး အခိုး အငွေ့ များ အခြား သို့ မထွက် နိုင်ရန် ခါးအောက်ပိုင်း နှင့် အိုးကို ပါ အဝတ်ထူ ထူ ရစ်ပတ်၍ အငွေ့ မှိုင်း ခံပါက မျှော့များ အကောင် လိုက်သော် လည်းကောင်း၊ ကြေပြုတ်၍ သော်လည်းကောင်း ကျလာစေ ၏ ။ လောက်သေရွက် နှင့် ကြွက်နားပေါင်း ဆတူပြုတ် ၍ လက်ဖက်ရည် ကြမ်းပန်းကန်လုံး နှင့်လည်း ခပ်ပူပူ သောက်ပေးရ ၏။
Item Name —— Desmodium triquetrum DC(လောကျသပေငျ)
မွနျမာ နိုငျငံ အောကျပိုငျး စှတျစို သော ဒသေ မြား ၌ ပေါကျ၏။သဘာဝ အလြောကျ ပေါကျရောကျသညျ။
ပငျပြော့ ပငျငယျ သကျပွငျး မြိုး ဖွဈသညျ။ မှီတှယျ ရာမရှိ သော နရောမြား ၌ မွပေျေါတှငျ ဖွနျ့တှား ပေါကျ၏ ။ အမွငျ့ ၅-၆ ပခေနျ့ မွငျ့၏။ ပငျစညျ သေးသှယျ ပွီး မှဲခွောကျခွောကျ ရောငျရှိသညျ။ အကိုငျး အခကျ မြား အညိုရောငျ ရှိသညျ။
ရှကျ လှဲ ထှကျ၏။ အလြား ၆ လကျမ ၊ အနံ ၂ လကျမ ခနျ့ ရှိ၏။ ရှကျထိပျ ခြှနျ၏ ။ အပျေါ မကျြနှာ ပွငျတှငျ သေးငယျသော ဆူးကလေးမြား ရှိသညျ။ ရှကျညှာအတောငျ ပါသညျ။ ရှကျညှာရငျးနားတှငျ ရှကျစှယျအဖတျလေးမြား ရှိ၏ ။
အလှနျသေး ငယျ ၏။ နီရောငျ သမျးသော အညိုရောငျ သို့မဟုတျ မရနျးရောငျ ရှိ၏။ နတျတျော၊ ပွာသိုလ မြား တှငျ ပှငျ့ ၏။
သီးတောငျ့ ဖွဈသညျ။ ၁ လကျမမြှ ရှညျ၍ ပွား၏ ။ ၁ လကျမ မြှ ရှညျ၍ ပွား၏။အဆဈ ၆-၈ ထိရှိ ပွီး ပွောငျခြော ၏ ။ သို့မဟုတျ အမှေးနု မြား ရှိသညျ။ တပေါငျး ၊ တနျခူး လမြား တှငျ အသီး ရငျ့ မှညျ့သညျ။
အမွဈ ၊ အရှကျ ။
မွနျမာ ဆေးကမျြး မြား အလိုအရ လောကျသေ ပငျ သညျ လေ ၊ သလိပျ သညျးခွကေို နိုငျ၏ ။ အသကျကို ရှညျစေ ၏ ။ ကာမကို အားပေး ၏ ။ ရောဂါ ဖွဈစသေော ပိုး မြား ကို ပယျတတျ ၏ ။ အဆီကို တိုးပှား စေ ၏ ။ အူတို့ ကို တှနျ့ရှုံ့ စတေတျ ၏ ။ အဖြား ရောဂါ ၊ အဖြား ရောဂါ ကွောငျ့ ဖွဈသော စိတျမသကျသာ မှု ၊ လရေောဂါ၊ မွငျးသရိုကျ ၊ ဖောရောငျခွငျး ၊ပနျးနာ ခြောငျးဆိုး ၊ ရငေတျနှငျ့ အနျခွငျး တို့ကို ပြောကျစနေိုငျ သညျ။
၁။ ဆီးတှငျ သှေးပါသော ရောဂါ အတှကျ အမွဈကို ငရုတျကောငျး အနညျးငယျ ထညျ့ကြိုပွီး ဆီးပွှနျ ခြောငျးမှ ၎င်းငျး ပွုတျဆေး ကို ဖနျပွှနျ ပိုကျ စသညျဖွငျ့ သှငျးပေး သျော ပြောကျ၏။
၁။ အရှကျ မနုမရငျ့ ကို ပွုတျ၍ သုပျစား ခွငျး ၊ တို့စား ခွငျး ဖွငျ့ ဝမျးကိုကျ ရောဂါ ၊ ဝမျးဖော ဝမျးရောငျ ရောဂါ ၊ ကလေးမြား သနျဝမျးကိုကျ ခွငျး၊ ရငျပွညျ့ရငျကယျ ဖွဈ ခွငျး ပြောကျ၏ ။
၂။ အရှကျကို လကျဖကျ ခွောကျ ကဲ့သို့ သောကျသုံး သျော ဆီးပူ ဆီးအောငျ့ ရောဂါ နှငျ့ အရပွေား ရောဂါ ပြောကျ၏။
၃။ ၎င်းငျးအရှကျ ကို အခွားသော ဆေးပငျ တို့နှငျ့ ပေါငျးစပျ၍ ဆီးရှငျ ဆေးအဖွဈ ဖျောစပျ သုံးနိုငျသညျ။
၄။ လောကျသရှေကျ နှငျ့ ထားဝယျ မှိုငျး ရှကျ ကို ရနှေေး ဖွော ၍ သုပျစား သျော ဆီးပူ ၊ ဆီးအောငျ့ ၊ ဝမျးကိုကျ ၊ သှေးဝမျးသှား ၊ သှေးမွငျး သရိုကျ ၊ မီးယပျ သှေးလှနျ တို့ကို ရပျတနျ့ စသေညျ။
၅။ လောကျသေ ရှကျခွောကျ ၊ ဖလံ တောငျ ဝှေး ရှကျခွောကျ တို့ကို ဆတူ အမှုနျ့ ပွု ၍ အုနျးဆီ နှငျ့ ဖြျော စပျပွီး နပေူပူ တှငျ လှနျး၍ အပျေါ ဆီအကွညျကို နားတှငျး သို့ အစကျခြ ခွငျး၊ ကွကျတောငျနှငျ့ ကွပျပေးခွငျး ပွုလုပျပါက နားပွညျယို ၊ နားကိုကျ ရောဂါ မြား ပြောကျရနျ နားတှငျး ရှိ ပိုးမြားကို သစေသေညျ။ လိမျးဆေး အဖွဈ သုံးပါက ဝဲနာ၊ အနာစကျနာ ၊ အနာမီးလြှံ ၊ အိုငျးနာ ၊ ဒကျနာမြား ပြောကျ၏။
၆။ လောကျသရှေကျ ၊ စံကားစိမျး ပှငျ့ခွောကျ တို့ကို နှမျးဆီ စဈစဈနှငျ့ စိမျပွီး ခေါငျးလိမျးဆီ အဖွဈ သုံးပါက ခေါငျးကိုကျ ၊ ခေါငျးပူ ၊ ဗောကျထခွငျး ၊ ယားခွငျး ၊ သနျးပေါခွငျး မြား ပြောကျ၍ ဦးနှောကျ ကို ကွညျလငျ စသေညျ။
၇။ လောကျသရှေကျ နှငျ့ ဆောကျပွာရှကျ ၂ မြိုးကို ပွုတျ၍ ရနှေေးနှေး ဖွငျ့ မီးဖှား ပွီး နောကျ မိခငျ ကို လညျးကောငျး၊ ကလေးကို လညျးကောငျး ခြိုးပေးပါက ကဗြဟုံး ရောဂါ ၊ မှေးကတညျး က ပါလာတတျသော သူငယျနာ မြိုးစုံ ၊ အကွောတကျ ၊ အကွောကပျ ရောဂါနှငျ့ မိဘကိုယျမှ ကူးစကျတတျ သော ရောဂါ မြားကို ကာကှယျနိုငျ၏။
၈။ လောကျသရှေကျ ကို ကိုယျပူ ခြှဲထ ၊ အညှျောဝငျ ၊ ခြောငျးဆိုး နှာစေး ၊ နှာပိတျ ရောဂါ အတှကျ လညျး ဆေးဖျော စပျသုံးနိုငျ ၏ ။
၉။ လောကျသရှေကျ ၊ ရခေရာ ရှကျ ၊ နနှငျး ရိုးရိုး အရှကျ ဆတူ အကြှမျး လှျော၍ နှမျးဆီတှငျ ဖြျော လိမျးပါက ကလေးမြား ခကျြကွိုး ခကျြတိုငျ ကိုကျခွငျး ပြောကျ၍ ခကျြကွိုး ကွှလှေယျ၏ ။ နို့ခြောငျး ပိတျ ၊ နို့နာ ၊ နို့ပဉျြးထ သော မိခငျ မြားကို လိမျးပေးက လငျြမွနျစှာ သကျသာ ပြောကျကငျး စေ၏။
၁၀။ ကလေးမြား အနာစကျ ၊ ဝဲစို ၊ အိုငျးနာ ကို လောကျသရှေကျ အကြှမျးလှျော၍ ရနေံကွီး စဈ စဈ နှငျ့ လူးလြှငျ ပြောကျ၏ ။
၁၁။ ကြှဲ နှား မြား အနာပေါကျ၍ လောကျကောငျ မြားကခြွငျး ၊ ငပိအိုး တှငျ လောကျကောငျမြား ကခြွငျး အတှကျ ၎င်းငျး လောကျသရှေကျ ကို ထောငျး၍ အမှုနျ့ဖွူး ပေးသျော လောကျမြား သကွေေ ပကျြစီး ပွီး အနာမြား ကို လညျး အသားနု တကျ၍ ကကျြစေ၏။
၁၂။ စအို မြှော့ ဝငျကာ ရောဂါ အတှကျ လောကျသရှေကျ ၊ ကွှကျနား ပေါငျးရှကျ၊ ကွကျမှေး(ကွကျတောငျ မှ အမှေး) ၎င်းငျး ၃ ပါး ဆတူ စု၍ ပွုတျပွီး အငှကေို့ ခြှေးအောငျး သကဲ့သို့ အိုးပျေါတှငျ ထိုငျပွီး အခိုး အငှေ့ မြား အခွား သို့ မထှကျ နိုငျရနျ ခါးအောကျပိုငျး နှငျ့ အိုးကို ပါ အဝတျထူ ထူ ရဈပတျ၍ အငှေ့ မှိုငျး ခံပါက မြှော့မြား အကောငျ လိုကျသျော လညျးကောငျး၊ ကွပွေုတျ၍ သျောလညျးကောငျး ကလြာစေ ၏ ။ လောကျသရှေကျ နှငျ့ ကွှကျနားပေါငျး ဆတူပွုတျ ၍ လကျဖကျရညျ ကွမျးပနျးကနျလုံး နှငျ့လညျး ခပျပူပူ သောကျပေးရ ၏။
သုတမောငျ မှ ကူးယူဖျေါပွပါသညျ။